eHimalayatimes | विचार/साहित्य | कम्युनिष्टविनाको कम्युनिष्ट सरकार
19th February | 2019 | Tuesday | 10:02:03 AM
कम्युनिष्टविनाको कम्युनिष्ट सरकार
राजन कार्की POSTED ON : Thursday, 14 June, 2018 (5:59:08 PM)
२०५२ सालमा सुरु भएको जनयुद्ध १० वर्ष चल्यो । जनयुद्ध हाँक्ने कमाण्डर, हाइकमाण्ड सत्तामा छन् । त्यसो त २०२८ सालतिर जनवादी विद्रोह गर्ने झापा आन्दोलनका एक नाइके केपी ओली प्रधमानमन्त्री नै छन् । यी दुबै कम्युनिष्ट थिए र अलिे मिलेर नेकपा बनाएका छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने यी दुबै नेता लोकतान्त्रिक अर्थात नेपाली कांग्रेसको नामोनिशान नदँेखिने कुतर्क गरिरहेका छन् ।
यिनले बिर्सिए– नक्सलवाडीका कम्युनिष्ट नेताले कार्यकर्ताले पुँजीवादी चोला फेरे भनेर रुखमा झुण्डिएर मर्नुप¥यो । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले खुला अर्थनीति अँगालेर चीनलाई विश्वशक्ति त बनाए, तिनै सी जिन पिङले नेताका सम्पत्ति सबै राष्ट्रको हुने घोषणा गरेका छन् । बेलायतमा नाम चलेका नेपाली प्रोफेसर कुलबहादुर लुइँटेलका अनुसार बृटिसका दृष्टिमा कम्युनिजम विश्वमा असफल सिद्ध राजनीतिक व्यवस्था हो ।
हो, २०४६ सालको परिवर्तनपछि चुनाव कांग्रेसले जिते पनि देशै राताम्मे देखिएको थियो । सूर्य अंकित झण्डा जनआन्दोलन सफल भएको २०६३ वैशाख ११ गते बिहानसम्म कतै थिएन । थियो त रुखका हाँगा र माओवादी लडाका तथा समर्थकका सलह पंक्ति । मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौता गर्ने दिनसमेत सूर्यअंकित झण्डाको रङ कतै कतै मात्र थियो । राजतन्त्रको निर्णय जनमत संग्रहबाट हुनुपर्ने एमालेको अडान एकाएक कुनै आकाशवाणीको निर्देशनमा बदलियो र गणतन्त्र सम्भव भएको हो । गणतन्त्र कार्यान्वयन प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभामा पेश गर्न सकेनन्, उनले खेताला पठाए कृष्णप्रसाद सिटौलालाई जो झापाबाट चुनाव हारेका कांग्रेसी थिए ।
जेहोस्, गणतन्त्र कार्यान्वयन भयो तर संविधान निर्माण गर्ने जिम्मेवारी कम्युनिष्टले पूरा गर्न सकेनन् । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने र लुकेर हिर्काउने रातो किताबका घोकन्ते कम्युनिष्टहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई को प्रधानमन्त्री भएनन् ? सबै भए तर दुईपल्टको संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान जारी गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सम्भव बनाए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री बने केपी ओली । उनले समेत संविधानअनुसार चुनाव गराउने हिम्मत नगरी सत्ता छाडे । चुनाव गरायो कांग्रेसले, कांग्रेस नेतृत्वको शेरबहादुर देउवाको सरकारले । स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा, संघीय संसदको चुनावको नतिजा कांग्रेसको पक्षमा आएन । शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ, संसद भनेको बोकाको टाउको देखाएर बाख्रीको मासु बेच्ने थलो भन्ने कम्युनिष्टले स्थानीयदेखि राष्ट्रियतहसम्म चुनाव जित्यो । २०१५ सालको ४ सिटे कम्युनिष्ट यतिबेला देशैभर राताम्मे छ । यसमाथि दुई जनवादी भनिने एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेपछि त देशै राताम्मे भएको छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा कम्युनिष्टको जित । नेपाली जनताले जनवादी व्यवस्थाका लागि जिताएका हुन् कि कम्युनिष्टको लोकतान्त्रिकीकरणका लागि यसरी प्रचण्ड बहुमत दिएका हुन् ? यो बहसको विषय हो । यो सवालको जवाफका लागि केही वर्ष पर्खनु पर्ला किनभने सारा विश्व चकित त भयो, नेपालका कम्युनिष्टले चमत्कार त गरे, यो चमत्कारमा आमनागरिकले समर्थनको पञ्जाछाप पनि लगाइदिए । तर, यो अपराध अधिनायकवादका लागि पञ्जाछाप होइन किनभने आमनागरिकदेखि सिङ्गो विश्व नेपालको कम्युनिष्ट शासनलाई चीलका नजरले हेरिरहेका छन् । नेपालमा को छ कम्युनिष्ट, के छ कम्युनिष्ट ? यो गम्भीर प्रश्नमा विश्लेषण सुरु भइसकेको छ ।
कारण, कम्युनिष्टहरूमा जुकाको जस्तो भ्रष्टाचारी सुँड र पित्ले, घ्याम्पे भुँडीवालको बोलवाला छ । एनजीओदेखि बैंकरसम्म, स्कूलदेखि युनिभर्सिटीसम्म, स्वास्थ्यदेखि जलस्रोतसम्म, सञ्चारदेखि सेयरबजारसम्म, राज्य र समाजका सबै सञ्जालहरूमा कुनै खन्चुवा, भ्रष्ट, दलाल, पदीय दुरुपयोग गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको छ भने सयमा ८० कम्युनिष्ट छन् । अब त सुनतस्करीदेखि माफियासम्म, डन र दस्ता खडा गरेर कमाउ अभियानमा लागेका समेत सयमा ८० कम्युनिष्ट नामधारी देखिन्छन् ।
यसकारण प्रश्न उठेको छ– को छ कम्युनिष्ट ? नेपालमा के छ कम्युनिष्ट जस्तो ? भर्खर दुईतिहाई बहुमत भएको कम्युनिष्ट सरकारले बजेट ल्यायो, बजेटमा सम्पत्तिको स्रोत नखोजिने भन्ने नीति नै सार्वजनिक भयो । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भयो, सबै त सुन र सम्पत्तिले धनाढ्य देखिए । २०४६ सालपछि भ्रष्ट कांग्रेस अथवा मधेसी नेताहरूमात्र होइन, सबैभन्दा भ्रष्ट त कम्युनिष्टहरू पो रहेछन् । यसले के देखाउँछ भने राजनीति कम्युनिष्टका लागि मुनाफाको ग्यारेण्टी भएको पेशा बनेको छ । यो पेशामा कम्युनिष्ट उत्पादक, डिलर, सबडिलर सबै आफँै बनेका छन् । सर्वहारा वर्गको नारा लगाउने कुनै कम्युनिष्ट नेता सर्वहाराजस्तो देखिन्छ ?
हरेक कम्युनिष्ट नेताको अनुहार र तिनको रहनसहन हेर्दा लाग्छ, नेपालका कम्युनिष्ट करोडीमल हुन्, अरबका शेख हुन् । करोडीमल र शेखको सोच राष्ट्रिय गौरव, गरीब, किसान, मजदुर, महिला, सीमान्तकृत वर्ग, दलिततिर होइन, स्वार्थ र सत्तामा बढी हुनेगर्छ । जब जनता जनता जोड्न सकिन्न, त्यो देशको आधार जहिले पनि बालुवाको ढिस्को जस्तो हुनेगर्छ । यी कम्युनिष्ट करोडीमल, शेखहरूले राज्यसँग १२६ जातिलाई जोड्ने होइन, यिनलाई फोडेर भोट बैंक निर्माण गर्नतिर नै लागिरहेको देखिन्छ । यहाँसम्म कि योजना आयोग र सरकारको योजना र विकास बजेट संघीयतातिर काटेर सांसदको हातहातमा दिएको छ । सांसदलाई ठेकेदार बनाउने र बिलभरपाई मिलाएर भ्रष्टाचार गर भनेर उक्साउने सरकारले कसरी राष्ट्रनिर्माण, शान्ति, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नसक्छ ?
यो सरकार आफूलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्छ, उखु किसानले ५ वर्षदेखि उखु बेचेको पैसा पाएका छैनन्, किसानले मल बीउ बिजन कालोबजारमा किन्नुपरेको छ, किसानको उत्पादन सिण्डिकेटवालाले लुटिरहेका छन्, मजदुरको बेहाल भएको छ, परम्परागत नीति हो युवा निकासी गरेर रेमिटान्समा ढलीमली गर्ने, यो सरकार अरू देशमा युवा निकासी गर्ने गुहार लगाउन थालेको छ । यस्तो सरकार कम्युनिष्ट सरकार ? चीन, भियतनामबाट सिक्ने हो भने जनताले ५ वर्षका लागि अवसर दिएकै हुन्, समाजवादका लागि कालजयी निर्णय गरेर महाथिर मोहम्मद बन्ने मार्ग लिनुपथ्र्यो । छैन, के छ कम्युनिष्ट, को छ कम्युनिष्ट, उही हाटहुट, लाटलुट मात्र छ ।
भ्रम छर्न खप्पिस छ नेकपाको सरकार । पानीजहाज, हावाबाट बिजुली, १० वर्षमा देशै स्वर्ग बनाउने कुरा । उफ् ¤ मान्छे हाँस्न थालेका छन् । सरकारी निवास अगाडिको बाटो टाल्न नसक्ने, फोहर फाल्ने प्रवन्ध नमिलाउने सरकारले विकासको गुड्डी हाँक्ने ? बुझ्नेहरू भन्छन्– अलि हजम भएन । हजम हुने कुरा गरेको भए न हजम हुन्थ्यो ।
जो कम्युनिष्ट जस्तो छैन, कम्युनिष्ट जस्तो केही छैन, ती नेता कम्युनिष्ट नेता, त्यो पार्टी नेकपा । चुनाव जित्नु कम्युनिष्टको सफलता हो, यो जीत देशको सफलता हुनका लागि, कम्युनिष्ट देखिनुपर्छ, नेताहरू कमरेडजस्ता हुनुपर्छ । कांग्रेस नीतिमा अडेन, जनविरोधी काम ग¥यो, आफैँमा विभाजन भयो, अनेकन कारणले कांग्रेस हा¥यो । दण्ड जनताले दिने हो, दिनु पर्छ तर अहिलेको जीत कम्युनिष्टतन्त्रको जीत होइन । भारतले नाकाबन्दी लगाइदिँदा प्रधानमन्त्री ओली थिए र उनले लिन बाध्य भएको राष्ट्रिय अडानको जीत हो । त्यो अडानभित्रको राष्ट्रवादी ज्वारभाटाको जनशक्ति नबुझ्ने हो भने कम्युनिष्टको जीत छिटै ओह्रालो यात्रातिर लाग्नेछ । त्यसो त, बालकृष्ण ढुंगेललाई दिएको माफी र यो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटले ठूलै धक्का दिइसकेको छ ।
संविधान लोकतान्त्रिक छ, पद्धति लोकतान्त्रिक हो । यसको कमाण्ड मात्र कम्युनिष्टको हातमा पुगेको हो । यो अनौठो संयोगलाई सदुपयोग गरेर देशको आर्थिक सामाजिक दिशा दिन सकिएन भने फेरि पनि प्रश्न उठ्नेछ, के छ कम्युनिष्ट, को छ कम्युनिष्ट ?
एउटा डरलाग्दो आशंका गर्न सकिन्छ । भारतले सिक्किम खानका लागि महारानी होप र लेण्डुप दोर्जीको हतियार चलाएको थियो । २१ औं शताब्दीमा कम्युनिष्टको ऐतिहासिक विजय, कम्युनिष्टको सरकार ? चाप्लुसका कारण नेपालको राजतन्त्रात्मक इतिहास मेटियो । कम्युनिष्टको यो जीतका पछाडि पराईको त्यस्तै कुनै ग्य्राण्ड डिजाइन त छैन ? किनभने जनादेश नै नलिई हिन्दुधर्म र राजतन्त्र सिध्याउने काम यिनैले गरे, त्यसका लागि यिनले विदेशी सहयोग लिएकै हुन् । विदेशी पैसाले संविधान लेखियो, चुनाव गराइयो, जित्नेले जिते, विदेशी सहयोगको स्वागत गर्नेले अदालत, संसदसम्म दातृ समूहलाई प्रवेश गराएका छन् । संसदमा नेमकिपाका सांसदको ताजा प्रश्न छ– हामीले खाने भातमा कुन दातृसमुदायको सहयोग छ ? यो प्रश्न मृत्युघण्टाजस्तो बज्दैन भने नेपाल र नेपालको लोकतन्त्र कसरी बच्छ ?
के छ कम्युनिष्ट, को छ कम्युनिष्ट ?